I-Adobe Muse - Umculo wamahhala kunye nokulandwa kweendaba kwiividiyo zakho ze-YouTube okanye iiprojekthi ze-multimedia
Udidi: Adobe Muse
I-Adobe Muse ngumakhi wewebhsayithi ovumela abaqulunqi ukuba benze iiwebhsayithi ezizinzileyo, ezichanekileyo kunye nezilungeleyo ngaphandle kokubhala nayiphi na ikhowudi. U Muse uvelisa iiwebhusayithi ezingokoqobo ezinika abasebenzisi inkululeko yokusingatha iziza zabo kunye nabani na ababoneleli. Abasebenzisi bangongeza imisebenzi ephakamileyo efana nokubhuloza kunye neCommerce kwiwebhusayithi yabo kunye neeplagi ezidalwe ngabakhi bezithathu. Lolu hlelo lufumaneka kwi-Adobe's Creative Cloud yobhaliso. U-Muse uya kupheliswa ngo-Matshi 2020, kunye nokuphuculwa kokugqibela okubonakalayo ngoMatshi 2018.